Maamulka Jubland oo Gurmad gaarsiiyay dadka ay Abaaraha ay saameeyeen – SOMALI RADIO ONAIR
Maamulka Jubland oo Gurmad gaarsiiyay dadka ay Abaaraha ay saameeyeen
February 9, 2022 nuxur wararka Uncategorized 0
Maamulka Jubland ayaa In ka badan 250 deegaan oo ku yaala gobolka jubada Hoose gaarsiiyay gurmad kala duwan oo isugu jiro cuno iyo biyo, sidoo kale waxaan meelaha qaar la geeyay howlwadeeno iyo dhakhaatiir caafimaad oo la tacaala xanuunka #Covid19 oo meelaha qaar aad ugu faafay.
Iyadoo ay jiraan dadaaladaas baaxada leh, hadana wali dhibaatada abaartu waa mid u baahan gurmad dheeraad ah.
“waxaan ugu baaqayaa dhamaan hay’adaha gargaarka iyo cid walba oo ka qeyb qaadan karta inay taageero ka gaysato gurmadka aan wadno”. Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Madaxeynaha dowlad goboleedka Jubbaland
Dad lagu qiyaasay 174,000 oo qoys ayaa ku barakacay abaarta iyo saamanteeda laga soo bilaabo Oktoobar 2021, iyadoo dadkaas ay wajahaday cuno yari baahsan iyo biyo la’aan meelaha qaarna wali dadku ay la il daran yihiin.
Gobolka Jubada Hoose oo kaliyah, waxaa ku barakacay 76,000 oo qoys halka sidoo kale Jubada dhexe ay ku barakeceen dad gaaraya 40,000, gobolka Gedo isagana waxaa ku barakacay 58,000 qoys ilaa bilowga sanadkan.
Ra’iisal Wasaare Rooble oo la kulmay Safiirka Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya
Madaxweynaha Hirshabeelle oo kulan la qaatay mas’uuliyiinta Maamulka gobolka Hiiraan